Somaliland 31 sano ka dib!
Monday June 20, 2022 - 08:36:13 in Articles by Hadhwanaag News
Waxaa dhawaan loo dabbaal degay sannad guuradii 31aad ee kasoo wareegtay markii Somaliland lasoo noqotay madaxbanaanideeda. Xaflado qurux badan ayaa lagu qabtay Hargeysa iyo dhamaan magaalooyinka Somaliland. Waxa sidoo kale laga damaashaaday badi dunida meelaha ay ku sugan yihiin bulshada Somaliland. Sawiro qurux badan, dad faraxsan, ciidamo gaardiyaya iyo dad qiiraysan ayaa la arkayay muuqaaladooda oo qabsaday TVyada iyo baraha bulshada. Waxa la sameeyay xaflado dawlad iyo mucaaridba. Xaflado inta Somaliland wada lihi ku faraxsanaayeen kuna faanayeen. Meelo aan beryihii hore aad looga xusi jirin ayaa doorkan laga dabaaldegay.